Etazonia sy Kanada dia manitatra ny fanidiana ny sisintany hatramin'ny 21 Jolay
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Etazonia sy Kanada dia manitatra ny fanidiana ny sisintany hatramin'ny 21 Jolay
Kanada sy Etazonia dia nanaiky ny hanitatra ny fifanarahana mba hitazomana ny sisin-tany hikatona amin'ny dia tsy ilaina mandritra ny Coronavirus areti-mifindra mandra-pahatongan'ny 21 Jolay. Nilaza ny praiminisitra kanadianina Justin Trudeau fa hanitatra ny fanakatonana mandritra ny 30 andro ny fifanarahana tamin'ny talata. Ny 18 martsa dia nambara ny fameperana ary nitatra ny volana aprily sy mey.
Ireo Amerikanina izay miverina any Etazonia sy Kanadiana izay miverina any Kanada dia tsy afa-mivoaka amin'ny fanidiana ny sisintany. Ny sisin-tany amerikana-canada no lava indrindra manerantany amin'ny firenena roa.
Ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny any Mexico dia nibitsika tamin'ny talata fa ny governemantany sy ny Etazonia dia nanaiky ihany koa hanitatra ny famerana ny fivezivezena tsy ilaina any amin'ny sisin-tanin'izy ireo mandritra ny 30 andro.
Ny departemanta amerikanina misahana ny fandriam-pahalemana dia nilaza tamin'ny 19 mey fa hitarina hatramin'ny 22 jona ny famerana ny sisin-tany ho an'i Kanada sy i Mexico.